FC ST LC Fiber Optic isku xira Waayo FTTH Networks Iyadoo Loss Galinta Sare
Nooca isku xira:
Blue, Green, Boor
Ku noqo Loss:
FC LC ST isku xira Fast for FTTH Networks la Loss Galinta Sare
isku xira Soonkii waxaa loogu talagalay oo tayo sare leh oo ku oolnimada sare loogu rakibo.
Dhismaha crimping booska waa design gaar ah, oo looma baahna bidabeysan, qiraan oo innaba mar la isticmaalo.
Karin in loo, oo ku habboon loogu rakibo beerta.
Qaab dhismeedka fiber laga hirgeliyey Pre-rakibay.
khasaare galinta Low iyo khasaaro soo laabtay sare
Isticmaalka sax sare ferrule dhoobada
awood Xasilloon iyo isku halaynta sare
awoodda farsamo u fiican
Kabaha in midabo kala duwan
Isticmaal for terminal indhaha FTTH furan si loo soo afjaro.
Connection in la xiro, golaha wasiirada, sanduuqa terminal iwm
Recovery iyo dayactirka shilka sida xaaladda fiber cut.
LAN, WAN, xogta iyo gudbinta video.
Dhisidda iyo dayactirka ee FTTX of user terminal
Fiber in saldhiga mobile.
Life Time: Our fiber optic isku xira dhakhso leeyihiin ugu yaraan 15 sano uu nool yahay, maxaa yeelay, waxaannu soo bandhigo wax soo saarka sare technolege and100% alaabta ceeriin CUSUB, sidoo fiber optic gacanta tayo isku xira degdeg ah ee.
Cable 3.1 × 2.0mm cable dhibic ama 3.0 / 2.0 / 0.9mm cable
Ballaca daahan 250μm
Loss galinta ≤ 0.3dB
Loss noqo SM: ≥45dB; MM: ≥35dB
isticmaali karo Times > 10 jeer
Xoog siligga > 50 N
heerkulka -40 ~ + 85 ° C
FTTH Xidhmada isku xira Fast:
xirmo waxaa lagu buuxiyey doonaa si waafaqsan shuruudaha dhoofinta caadiga ah, satisfication macaamiisha waa bartilmaameedka.
Label daabacay: logo Macaamiisha ama brand None waxaa laga heli karaa
xirxirida Inner: 10pcs / box PE
xirxirida dibadda ah kartoonka lagu buuxiyey doonaa jirtay joonyaddiisii, sidoo kartoonka Carro iyo qoyan ka ilaaliyo.
cable dhibic ftth,
fiber optic cable dhibic
Fiber Field Golaha FTTH SC / UPC Fiber Optic ...
Fast isku xira FTTH dejinta Cable Field Quick Shirbow ...
SC 50um / 62.5um FTTH Network Fiber Connec Fast ...